Rugby – Lalao fihantsiana : hifampitsapa amin’i Tsekoslovakia ny Makis | NewsMada
Rugby – Lalao fihantsiana : hifampitsapa amin’i Tsekoslovakia ny Makis
Hampiantrano lalao iraisam-pirenena indray ny baolina lavalava malagasy. Hanafika ny Makis de Madagascar, ry zareo Tsekoslovakia. Fihaonana ara-pirahalahiana, izany lalaon’ny roa tonta, izany.
Nangataka lalao ara-pirahalahiana, amin’ny Makis de Madagascar, ny federasiona rugby any Tsekoslovakia. Raikitra fa hotanterahina etsy amin’ny kianjaben’ny Mahamasina, ny 19 – 25 febroary 2018, izany lalao fihantsiana izany. Ankoatra izay, handray anjara amin’io fihaonana io koa ireo ekipa roa hisolotena an’i Madagasikara, eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny ranomasimbe Indianina (CCOI). Tafiditra amin’ny fanomanan-tenan’izy ireo, ity fivahinianan’i Tsekoslovakia, eto Madagasikara ity.
Hifandimby hikatroka amin’i Tsekoslovakia izany ireo ekipa telo ireo, raha ny fandaharam-potoana. Raha tsy misy fiovana, hifampitana voalohany, ny Makis sy ny ekipa tompondakan’i Madagasikara (Mada 1) ary i Tsekoslovakia indray hidona amin’ny ekipa tompondaka lefitra (Mada 2). Hifampitana amin’ny Makis indray ny Mada 2, eo amin’ny andro faharoa ary i Tsekoslovakia hikatroka amin’ny Mada 1. Adin’ny samy Malagasy ny lalao eo amin’ny andro fahatelo ary ny Makis hihaona amin’i Tsekoslovakia.
Hanomboka amin’ny volana desambra, ny fampivondronana ireo mpilalao handrafitra ny Makis de Madagascar, hiatrika izay nambaran’ny tomponandraikitra eo anivon’ny Malagasy rugby fa ireo mpilalao mandray anjara amin’ny fiadiana ny ho tompondaka, karakarain’ny Commission technique fédérale (CTF), ihany no horaisina. Tsiahivina fa na ekipa tsy mbola nandray anjara, tamin’ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany aza, ry zareo Tseky, dia manana mpilalao manatevina ireo klioba any Frantsa sy Angletera.